Taageerayaasha Donald Trump oo iskood gidaarka xadka u dhisaya - Jigjiga Online
HomeSomalidaTaageerayaasha Donald Trump oo iskood gidaarka xadka u dhisaya
Washington (JigjigaOnline) – Koox taageersan Trump ayaa billaabay dhismaha darbigii u horreeyay ee shaqsiyaad ay dhisayaan ee laga hirgaliyo xadka u dhaxeeya Maraykanka iyo Mexico, kharashka ku baxayana waxaa laga aruuriyay shacabka.
Brian Kolfage oo horay uga soo mid noqday milatariga Maraykanka ayaa soo bandhigay sawirka darbiga biraha ka samaysan ee ka socda gobolka New Mexico.
Wuxuu sheegay in ay ku baxday in kabdan 22 milyan oo doolar oo tabarucaad ah, taas oo uu online-ka ka aruuriyay sannadkii hore.
Tabarucaaddaas ayaa la billaabay ka dib markii Aqalka Congress uu diiday in uu meelmariyo dhaqaalihii uu Trump u baahnaa si darbi looga dhiso xadka Maraykanka, arrintaas oo ahayd ballantii u waynayd ee uu qaaday intii uu waday ol’olaha doorashada.
Kolfage oo horay uga soo mid noqday ciidammadda cirka ayaa labada lugood iyo gacan laga jaray, wadne ruux kalana uu ku jiraa, isaga oo Twitterka adeegsanaya ayuu Axaddii soo bandhigay muuqaallo iyo sawirro badan oo muujinaya dhismaha darbiga.
“TAARIIKH AYAAN SAMAYNAY! Waa darbigii u horreeyay ee xad dal ah, kaas oo lagu dhisay lacago ay shacab iska aruuriyeen, ayuu Kolfage ku soo qoray Twitterka.
Darbiga waxaa dhisaysa shirkad aan faa’iido raadis ahayn oo la dhoho WeBuildtheWall Inc, taas oo lagu aasaasay lacago lagu aruuriyay GoFundMe bishii Disembar, arrintaas ayaana hal hays looga dhigay dadka ayaa maalgalin doona dhismaha darbiga.
Steve Bannon oo istaraatiijiyadda u qaabilsanaan jiray Aqalka Cad ayaa gudoomiye u ah guddiga latilaya shirkaddaas.
Bannon ayaa CNN u sheegay in darbigan cusub uu 33KM ku dari doono darbigii sii jiray.